Kungani ngisahluleka ukuvula okungaguquki DBF ifayela? - DataNumen
Kunamathuba amathathu alesi simo, ngokulandelayo:
Your DBF Ifayela lenziwa ngohlelo olulodwa, kepha ufuna ukuvula ifayili elilungisiwe kolunye uhlelo lokusebenza, olungahambelani ngokuphelele nokwangaphambili futhi kudale izinkinga. Isixazululo ukusetha inguqulo efanele ebhokisini le-combo eceleni kwe- “Select DBF kuzolungiswa ”ibhokisi lokuhlela ngokuya ngohlelo lwesibili bese kuthi ama-starUkulungisa ifayela futhi. Isibonelo, i- DBF Ifayela lenziwa yiClipper kepha ufuna ukulivula ku-dBase III, lapho-ke udinga ukusetha i- "Version" ku- "dBase III" bese ulungisa ifayela futhi.
Ukulungiswa kwakho DBF ifayela likhulu kuno-2GB, umkhawulo wosayizi owaziwayo we DBF amafayela, ngakho-ke most DBF izinhlelo ezihambisanayo azikwazi ukuvula ifayela lakho. Isibonelo, uma usebenzisa i-Visual FoxPro ukuvula lelo fayela, uzothola iphutha elithi "Hhayi ithebula". Isixazululo ukunika amandla i- "Split file when it is older than # # # MB" option in the “Izinketho” ithebhu bese usetha inani elifanele, okufanele libe ngaphansi kuka-2GB, ngokwesibonelo, 1800MB, as the maximum size size, and bese ulungisa okwangempela kwakho DBF fayela futhi. Lapho okukhiphayo okukhiphayo ifayela kukhulu kunalo mkhawulo, uDDBFU-R uzokwakha ifayili elisha lokuhlukanisa ukufaka idatha esele esele. Futhi uma ifayili elihlukanisiwe lifinyelela kumkhawulo futhi, kuzokwakhiwa ifayela lokuhlukanisa elisha lesibili, njalo njalo.
Ku-fixed yakho DBF ifayela, kunezinkambu ezingaphezu kwama-255 etafuleni. Njengamanje most DBF izinhlelo zokusebenza ezihambisanayo azisekeli itafula ngezinkambu ezingaphezu kwama-255. Isibonelo, uma usebenzisa i-Visual FoxPro ukuvula lelo fayela, uzothola iphutha elithi "Hhayi ithebula". Isixazululo ukunika amandla "Itafula lokwahlukanisa lapho kunezinkambu ezingaphezu kwezingu- # # # kuthebhu" Izinketho "bese usetha inani elifanele, ngokwesibonelo, ama-255, njengobuningi bezinkambu, bese ulungisa okwangempela DBF fayela futhi. Ngakho-ke lapho uDDBFU-R uthola ukuthi kunezinkambu ezingaphezu kwezingama-255 etafuleni, kuzokwakha itafula elisha lokwehlukanisa izinkambu ezisele. Futhi uma izinkambu ezisele zisengaphezu kwezinkambu ezingama-255, kuzokwakhiwa itafula lesibili elisha lokuhlukanisa, njalonjalo.
ayikwazi ukuvula, ifayela elilungisiwe